I-Frenulum emfutshane emadodeni-Iingcebiso zeMpilo yaMadoda aSisitayile | Amadoda aQinisekileyo
I-frenulum emfutshane emadodeni
UAlicia tomero | | Ukunyamekela, ZeMpilo
I-frenulum emfutshane ingaba yingxaki enkulu yamadoda athile, ngakumbi kwizenzo zokwabelana ngesondo ngokwanelisayo, xa ungabinakho ukubuyisa okuqhelekileyo kwejwabi. Kufuneka kuqatshelwe ngakumbi ukuba ngexesha lokwakhiwa kwentloko yelungu lobudoda okanye i-glans kufuneka ikhululeke kuba ulusu lobudoda lurhoxisiwe umva ukugcina isondo olifunayo, ukuba akukho kurhoxiswa okanye kuba nzima luphawu lwejwabu elifutshane okanye i-frenulum emfutshane oko kuthintela ukurhoxiswa okuqhelekileyo.
I-frenulum inceda ukubuyisela ulusu lwejwabi elisusiweyo kwindawo yayo yesiqhelo, igubungela i-glans xa ilungu lobudoda liphumle okanye likwimo ecekeceke. Kodwa abantu abaninzi abazi ukuba bane-frenulum emfutshane kwaye oku kukhokelela kulwakhiwo kunye neengxaki zokwabelana ngesondo. Xa kuziwa kwesi sifo kunokubizwa"I-frenulum emfutshane" okanye "i-frenulum emfutshane".
1 Yintoni ifrenulum?
2 Iimpawu zokufumanisa okufutshane kwe-frenulum
3 Ukuphononongwa kunye nokuchongwa yingcali
4 Unyango kunye nezisombululo
I-frenulum ngunxantathu omilise isikhumba ifunyenwe ngaphantsi kweglans, phantsi kwejwabu, nangaphantsi kwepipi. I-frenulum iyanceda ukugcina ijwabi lisendaweni kwaye nakwiglans, ethi xa irhoxisiwe ikwanceda ukuba ibuyele kwindawo yayo yesiqhelo.
Le ndawo yomntu nayo yi "indawo erogenous yovakalelo olukhulu", kuba ngexesha lokwabelana ngesondo eli candelo libonisa ukonwaba okukhulu kunye nokuvuselela okuphindaphindiweyo. Ukuchukumisa kwakho okuqhubekayo kunokunceda ekwenzeni ulonwabo olwandisiweyo kunye inegalelo kwi-reflex ejaculatory.
Iimpawu zokufumanisa okufutshane kwe-frenulum
Kwiimeko ezininzi une-frenulum emfutshane sisiphumo sento yemfuzo, inokufunyanwa kwilifa lesihlobo. Ngamanye amaxesha kunokwenzeka ukuba umntu ukhe wahlupheka ngohlobo oluthile losulelo. Nantsi i-frenulum ifikelele kukudumba okukhulu kunye nefibrosis (ukuqina) kubangela frenulum mfutshane. Okanye kunokubakho ukwenzakala okanye ukwaphuka kwe-frenulum ngamanye amaxesha kwaye Ngexesha lokuphiliswa kwalo kufutshane.
Umntu ophethwe yifrenulum emfutshane uziva ngathi iintlungu ekuziphulula amalungu esini kunye nokwabelana ngesondo. Ukuba i-frenulum imfutshane kakhulu, inokuthi kwiimeko ezininzi idale ukungonwabi okungakhokelela ekungafezekini. Kwezinye iimeko iinyembezi zinokubangelwa Ziba buhlungu nokuba zibangele ukopha.
Ukuphononongwa kunye nokuchongwa yingcali
Ingcali ephethe uphononongo kunye novavanyo iya kuba yi-urologist, Ngoyena mntu unokukunika uvavanyo kunye nonyango olunempumelelo lolu hlobo lwemeko. Uvavanyo luyakwenziwa kwindawo apho ugqirha anokuyinyathela khona indawo kwaye enze intshukumo yokurhoxisa ijwabi ngaphandle kokunyanzela. Ukusuka apha uya kuqinisekisa ukusebenza ngokuchanekileyo kwejwabi kwaye ukuba ufuna naluphi na ungenelelo.
Unyango kunye nezisombululo
Kumatyala amnene ungaqhelisela uthotho lweentshukumo kwaye apho i-frenulum inokunikwa i-elasticity. Kubandakanya ukwenza ukurhoxa kunye nokuqhubela phambili kokuhamba kwejwabi ngoncedo lwee-corticosteroid cream ukuya ukunciphisa ukuvuvukala kunye nezicubu ezincinci. Ngale ndlela siza kwenza ukuba luthambe kwaye Kuya kufuneka ungaguquguquki ubuncinci iiveki ezi-4 ukuya kwezi-6.
Umsebenzi sisinye isisombululo. Inokubandakanya ukwenza intambo encinci enqamlezileyo kwi-frenulum emfutshane ukuphelisa uxinzelelo lwayo. Iya kwenziwa nge I-anesthesia yendawo, ngaphandle kwesibhedlele ngaphandle kokulaliswa esibhedlele nalapho kuya kusetyenziswa khona imithungo ukuvala inxeba elo. Kwiimeko apho kukho i-phimosis Ulwaluko luya kwenziwa, apha ijwabi liyakususwa ngokupheleleyo, libonakalise intloko yeglans.
Emva kotyando kufuneka ukusebenzisa iintlungu ukunciphisa iintlungu. Kwiintsuku ezilandelayo, unyango lwemihla ngemihla luya kwenziwa ukuhlamba indawo ngesepha kunye namanzi kunye nokufaka iodine ye-povidone. Emva koko, loo ndawo iya kufuneka igqunywe ngesinxibo ukuthintela ukungqubana.
Ugqirha uya kulandelela kwezi veki ngasemva ukuze kulandelwe ukuphiliswa okuhle kwaye kungabikho ngxaki kamva njengokuphuma kwegazi, usulelo okanye ukugruzuka. Awuyi kuba nakho ukulala ngesondo de loo ndawo iphiliswe ngokupheleleyo, kuyakufuneka ulinde ubuncinci iiveki ezine, kuxhomekeke kwindaleko yomntu.
Inokwenzeka kwezinye iimeko kunamadoda afuna ukuzibandakanya kwezokwabelana ngesondo kunye nale ngxaki (i-frenulum emfutshane) banakho kwiimeko ezininzi ukwenza iinyembezi kwindawo leyo okanye ukukrazula kwi-frenulum. Kwezi meko, ukuvela kwenzeka kwaye ngenxa yoko ukuphuma kwegazi okanye ukopha kwenzeka. Ngezi zihlandlo, ukuphilisa kwakhe kuyaqhubeka i-frenulum iba mfutshane kakhulu. Ugqirha kuya kufuneka enze uvavanyo kwimeko apho kuya kufuneka enze utyando okanye unyango nge-corticosteroid creams. Ukuba ukuqhekeka kwayo kwenzeka ngengozi, indawo yokubuyisela phakathi kweeveki ezimbini ukuya kwezine, apho kwezinye iimeko uvakalelo lunokulahleka.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » I-frenulum emfutshane emadodeni
Izinto zokwenza neqabane lakho
Kubiza malini ukufumana icici?